अरुको चुनावअघि भोज, बाबुरामको चुनावपछि भोज ! (फोटोकथा) | Nepalese.org - No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actoress, Audio, Video, Interview
गोरखा । पुसको जाडो, त्यसमाथि रात । गाउँको खुला चौरमा पकाइएको खानेकुरा गाउँका बुढाबुढी र भद्रभलाद्मीसँग बसेर खाइरहेका छन् एकजना चुनाव जितेका नेता तथा मुलुकका पूर्वप्रधानमन्त्री ।
काठमाडौंतिर फरक माहोल छ । तीन ठूला पार्टीका तीन दाउपेच छन् । एमाले भन्छ- सरकार पहिले, कांग्रेस भन्छ- राष्ट्रिय सभा पहिले र माओवादी भन्छ- पार्टी एकता पहिले । यी नेता गाउँतिर भोट हालेर जिताउने मतदातालाई भनिरहेका छन्, ‘यी र यस्तै दाउपेचको अन्त्य गर्दै राजनीतिक स्थायित्वका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख पहिले ।’
यस्तो अनौठो उल्टो दिशामा हिड्ने मानिस को होलान् ? यी हुन्- समृद्धिको लागि अब पुराना पार्टी काम छैन भन्दै नयाँ शक्ति बनाएका डा.बाबुराम भट्टराई । उनी भन्छन्, ‘पानी बगिरहेकोतिर त मरेको माछा पनि बग्छ, मुहानतिर जान केवल जिउँदो माछाले मात्र सक्छ ।’ त्यस्तै गरिरहेका छन् उनी । शहरतिर सत्ताको भागबण्डा, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, मुख्यमन्त्री र सयभन्दा बढी मन्त्रीहरुको भागबन्डा चलिरहेको छ । कुर्सी छोड्न नचाहने र कुर्सीमा छिटो बस्न चाहनेहरुबीचको शितयुद्ध चलिरहेछ । यो झगडाबाट टाढा रहेर उनी गाउँतिर उनकै भाषामा सहभोज गरिरहेका छन् ।
त्यस्तो त, यो चुनावमा भट्टराई नेतृत्वको पार्टीले अपेक्षा गरेजस्तो मत ल्याएन । उक्त पार्टी राष्ट्रिय पार्टी पनि बनेन । तैपनि आफ्ना मतदाताहरुलाई धन्यवाद दिँदै र चुनावपछिको ‘सहभोज’ गर्दै उमेरले ६३ नाघेका उनी गाउँगाउँ दौडिरहेका छन् । ‘आफ्नै जन्मथलो गाउँमा सानोछँदा खुलाचौरमा जन्तीबाख्रो खाएको सम्झाउने गरी गाउँलेहरूसंग सहभोज गर्दा आनन्दको सीमा रहेन,’ यो स्टाटस हो उनले राति ९ बजे पछि पोस्ट गरेको । साथमा उनले केही तस्बिरहरु पनि पोस्ट गरेका छन् ।
उनले सोमबार लेखेका सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘अरूले प्रलोभनको रूपमा चुनावअघि भड्किलो भोजभतेर गरे । हामी चुनावपछि उत्सवको रूपमा सामान्य सहभोज गर्दैछौं ।’ उनले यसलाई पुरानो र नयाँ शक्तिको फरकको रुपमा तुलना गरेका छन् ।
तस्बिरमा स्थानीय वृद्धवृद्धाहरु पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईसँगसँगै बसेर सहभोज गरिरहेका छन् । भट्टराई अबिरले रंगिएका छैनन्, मालाले पुरिएका छैनन् । उनी स्थानीयसँग संवाद गरिरहेका छन् । चुनावअघि आचारसंहिताको कुरा हुन्छ, भोजभतेरले मतदाता प्रभावित हुन सक्छन् । चुनावपछि सामान्यतः गाउँ फर्कनेकुरा नेताहरुले विरलै गर्छन्, थोरै मात्र फर्कन्छन् । चुनावपछि आफूले भोट हालेको नेता आफूसँग रातसाँझ सँगै बसेर खानपिन र संवाद गरिरहँदा स्थानीयहरु खुसी देखिन्छन् ।
नेता भट्टराईले निर्वाचन जित्नुअघि र जितेपछि पनि भनेका थिए, ‘हरेक नेपालीको घर नबनेसम्म म आफ्नो निजी घर बनाउँदिनँ । हुन त म पेशाले इन्जिनियर हुँ ।’ उनले महिनामा एक दिन जनताकोमा पुग्ने नीति नै बनाएका छन् । उनले यो प्रतिवद्धता आफू बिरामी हुँदादेखि प्रधानमन्त्री हुँदासम्म पूरा गरे । त्यसैले गोरखालीले उनलाई असाध्यै माया गर्दछन् । यसैको परिणाम हो, वामगठबन्धनको लहरको बेला पनि उनले गोरखामा वाम गठबन्धनका सुत्रधारलाई नै पराजित बनाउँदै विजयको माला लगाउन सके ।
कपिलबस्तुमा जीवन कष्टकर, तर सरकार मौन…